App basaasiin On iPhone
Maanta, Waxaan rabaa in aan wadaagno macluumaad faa'iido on spyware iyo Rights Reserved for iPhone.
iPhone ka heli kartaa spyware kasta oo keliya haddii ay tahay jailbroken. Haddii kale, ma suurtowdo in rakibi exactspy – App basaasiin On iPhone on iDevice kasta oo sida ay kuwan yihiin qalabka Rahman macmalay by Apple. exactspy waxaa la spyware-ka caan maalmahan loo isticmaalaa in dabagal iyo kormeer phone kasta oo mobile, oo ay ku jiraan iPhone OS. Haddii mobile aad waa jailbroken, waxaa jira itimaalka in lagugu soo basaasteen oo qof. exactspy shaqeeyaa hab qarsoon iyo ma siin wax kasta oo ups pop, files aan loo baahnayn, ogeysiin ama xayasiiska xiritaanka. User marna yimaado in la ogaado by fursad kasta oo ay yihiin kuwii aasayay u. Si kastaba ha ahaatee, haddii aad iPhone leeyahay qaar ka mid ah software Sep ama ka yar hufan, waxaa jiri doona qaar ka mid ah dhibaatooyinka loo marayo taas oo aad si fudud u xukumi karaa, in mobile-ka lagu soo basaasteen oo. Lacala, mobile helo gaabis ama jiifta oo aan la siiyo amarka, waa arrin dhici kara in lagu raad raaci by qof.
Ku xiridda exactspy – App basaasiin On iPhone waa mid aad u fudud oo ay qaadanayso ku saabsan 10 minutes loo sameeyo on iPhone. Ma aad u malaynayso ku saabsan software this on mobile aad, laakiin joogitaankiisa ay weli gebi la arki. Spyware lagu rakibi karo telefoonka gacanta si aad u hesho dhammaan faahfaahinta ku saabsan hawlaha sameeyo on mobile a. Kuwani waa faahfaahinta sidaas daqiiqadii in aad telefoon ku siin doona hawlaha kasta oo kasta oo la eegaayo hab abaabulan. Ma jirto sidan si toos ah si uu u hubiyo exactspy joogitaanka on your iPhone. Sidaas, aad u baahan tahay inaad xoogaa yar feejignaadaan sida waalidkaa, ninkaaga ama qof kale qaar ka mid ah laga yaabo in aan muuqan ku rakiban exactspy – App basaasiin On iPhone on your iPhone. Xataa waxay heli doonaan dhammaan faahfaahinta xataa haddii aad qufulan mobile-ka ama ama ay thay in Tilmaamo qaar ka mid ah. Waxa ka shaqeeya habka ugu effectual for iPhone rogaa xitaa natiijo wanaagsan for habab kale oo lagu mobile. Waxaad ka eegi kartaa website-ka rasmiga ah ee exactspy si ay u arkaan sida nidaamku u shaqeeyo iyo waxa uu xitaa aad ka faa'iidaysan karaan ujeeddo jaajuusnimo ah.
Iyadoo exactspy- App basaasiin On iPhone waxaad awoodi doontaa inaad si:
Waxaad Download karaa :”App basaasiin On iPhone“
App basaasiin On iPhone, How to spy on someones iphone, iPhone app for basaasayeen on fariimaha qoraalka, Iphone spy app cydia, Iphone spy app detection, Basaas iPhone App jailbreak no, Iphone spy app reviews, Iphone spy app without jailbreaking